Rose of Sharon: ဘာမှန်းမသိတဲ့ပို့စ်
Posted by rose of sharon at 8:40 PM
sosegado June 12, 2011 at 9:07 PM
ဆန္ဒတွေပြတကြတယ်ဆို၊ သွားကြည့်ဖြစ်သေးလား၊ အသံတွေတော့ကြားမှာပေါ့၊
ညီလင်းသစ် June 12, 2011 at 9:16 PM
ပို့စ်တွေမှာ အမြဲတမ်းချည်းတော့ messasge တခုခု ဘယ်ပါနိုင်ပါ့မလဲ၊ တခါတလေလည်း အခုလို current situation၊ တခါတလေလည်း အစားအသောက်၊ တခါတလေလည်း ဝမ်းနည်းစရာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒေါသဖြစ်စရာ... ဒီလိုပေါ့၊ ကြုံသလို အနေအထားတွေနဲ့ ဘလော့တွေက အသက်ဆက်နေကြတာပါပဲ၊ ပျော်ရွှင်စရာ ပြည်တော်ပြန်ခရီး ဖြစ်ပါစေလို့ အခုကတည်းက ဆုတောင်းပေးပါတယ်..။း)
rose of sharon June 12, 2011 at 9:30 PM
Sosegado>> မသိလိုက်ဘူး...အသံလဲမကြားလိုက်ဘူး... ကိယ့်ဟာကိုယ်ဘာတွေနဲ့မှန်းမသိအလ်ုရှုတ်နေတာ
ညီလင်းသစ်>> ဟုတ်ပနော်... နားလည်ပေးတာကျေးဇူးပါ..အားတက်သွားပြီ...နဂိုထဲက ကိုယ်က ရေးချင်တာတွေလျှောက်ရေးနေတဲ့သူဆိုတော့လေ... ဆုတောင်းအတွက်လည်းကျေးဇူးပါ
အပြုံးပန်း June 12, 2011 at 9:40 PM
မရို့စ်မှာ အဲဒီလို အခြေအနေတွေ ရှိနေမှန်း သိလိုက်ရတယ်လေ၊
Anonymous June 12, 2011 at 10:07 PM
အမ စာရေးပါ အရင်ကတည်းက အမြဲလာဖတ်တာ အခုနောက်ပိုင်း အမက မရေးဖြစ်လို. မျှော်နေတာ...
မောင်မျိုး June 12, 2011 at 10:16 PM
တစ်ခါခါကျ ဘာကိုရှုပ်လို့ ရှုပ်မှန်းမသိတာတွေ ရှုပ်နေတော့တာပဲ ။း) ကျနော်တို့လို လူလွတ်င်္တွေတောင် ရှုပ်သေးရင် အစ်မတို့ဆို ပိုဆိုးပေါ့ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာာာ။
ညိမ်းနိုင် June 13, 2011 at 12:47 AM
ကဲ...အခုတော့ အစ်မရို့စ်တစ်ယောက် ဘာတွေမှန်းမသိ အလုပ်တွေရှုပ်နေမှန်း
သိလိုက်ရပြီ...၊ရန်ကုန်ပြန်မှာလဲသိလိုက်ရတယ်လေ...:) အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေခင်ဗျ....။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) June 13, 2011 at 1:19 AM
ခုလို ဖွင့်ထုတ်လိုက်ရတော့လည်း စိတ်ထဲမှာ နေသာထိုင်သာတော့ ရှိသွားမှာပါလေ ။ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ပိုစ့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ချင်းစာနားလည်ခွင့်ရစေတဲ့ ပိုစ့်လေးဖြစ်မှာပါ အစ်မရယ်
Yin June 13, 2011 at 8:33 AM
Ma Naw Yae....
I also very disappointed this Vietnam Network. In Danang, I can't even use gtalk. Sorry can use gtalk but all the while just shout.....Hello ,,Hello kyar ya lar that's all... Haha.. Very disappointed.
For facebook U try lisp4.
An Asian Tour Operator June 13, 2011 at 10:06 AM
လသာည June 13, 2011 at 8:57 PM
ဘာမှန်းမသိတဲ့ပိုစ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်တော့ အလွမ်းပြေသွားတာပေါ့..။
ဗီယက်နာမ်ကတော့ ဖေ့ဘုတ်တောင် ပိတ်ပိတ်ထားတတ်တာ ဆိုတော့ ညစ်ပါ့.. နော့
ပြည်ကောင်းအောင် June 15, 2011 at 3:54 AM
ဗီယက်နမ် တော်တော်ကြီး တိုးတက်နေပြီ ထင်နေတာ။ ကျန်တာ တိုးတက်ချင် တိုးတက်မယ်။ ကော်နက်ရှင်ကတော့ အဲလိုကြီး လား။ ဗီယက်နမ်အကြောင်းပေးသိတာ message တခုပေါ့ဗျာ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ပြည်တော်ပြန် ခရီးဖြစ်ပါစေဗျာ..။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! June 15, 2011 at 11:28 PM
မမရေ သင်တန်းနဲ့ အလုပ် ချာချာလည်နေလို့ အခုမှပဲ ရောက်တယ် မမလဲ မအားတာကိုး....:):) ပျော်ရွင်ဖွယ် ခရိးစဉ်လေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်...
အဖြူရောင်နတ်သမီး June 16, 2011 at 11:35 AM
ဒီမှာတော့ နက်ကကောင်းပြီး လူက မအားတာ...း(
သတိရတယ်... စာရေးဖို့မအားတာရယ် အိမ်လည်ဖို့ပျက်ကွက်တာရယ်နဲ့ ... မျက်နှာပျက်စရာတွေကိုဖြစ်လို့....း(